रेडियो सुनेर २१ वर्षमै भलमन्सा भएँ सरी मलाई २०७३ सालको माघ १ गते थारू समुदायको गाउँको नेतृत्व गर्ने मुख्य व्यक्ति ‘भलमन्सा’ बनाइयो । धेरैले ताली बजाएर स्वागत गरे भने केहीले मसुरिया चौधरी सम्झेरै नाक खुम्च्याएर हाँस्न थाले । अनि उनीहरूसँगै म पनि मख्ख पर्दै हाँस्न थालेँ र सोच्न थालेँ हिजोको मसुरिया चौधरी म बल्ल पो प्रेम चौधरी बनेछु भनेर Share
मुन्टाे निहुर्‍याएर बसिरहने स्वेता बाल क्लबमा आएपछि यसरी बदलिइन् सानोमा बोल्न डराउने, प्रहरीसँग डराउने उनै बालिका अहिले प्रहरीसँग काँधमा काँध मिलाएर बाल शोषण, हिंसा अन्त्य गर्न लागि परिरहेकी छिन् । उनी एक अभियान्ता मात्र बनिन् समाजमा बाल क्लबको महत्व पनि दर्शाउन सफल बनिन् Share
मैले देखेको कथा सीताले त आफ्नो अधिकार खोजेर जीवन खुसीसाथ बिताइन् भने साथीहरू तपाईंहरूमाथि हिंसा भइरहेको छ भने सहेर नबस्नुस् है ! संसार धेरै ठूलो छ, यहाँ खुसीसाथ आफ्नो जीवन आफूले चाहेजसरी बिताउन सकिन्छ । मात्र तपाईंले हिंसा नसहने अठोट गरेर हिम्मतका साथ काम गर्नुपर्‍याे Share
निर्मला दिदीको निमा डेरी साथीहरू, निर्मला दिदीको संघर्षले मलाई भने राम्रो प्रेरणा दिएको छ । आत्मविश्वास दह्रो हुने मान्छेलाई सफलताको शिखर चुम्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन । यसकाे राम्रो उदाहरण मैले निर्मला दिदीको संघर्षबाट पाएँ Share
सामाजिक सञ्जालमा मेरो अनुभव हामीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरू प्रयोग गर्छौं र अहिले हामी प्रविधिसँग धेरै नजिक छौँ । विभिन्न माध्यममध्ये अनलाइन पनि एक हो । म अनलाइन बस्छु र विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि गर्छु Share
गरिबीले सिकाएकाे पाठ के भइरहेको छ ? किन भइरहेको छ र अब के हुन्छ ? यी सबैबाट अनभिज्ञ मलाई गाउँका ठूला मानिसहरूको बीचमा लगियो । उसको कर्तुत भन्न लाइयो । पछि सुने समाजले, त्यसै दिन त्यसलाई सजाय दिइयो रे ! Share
ए छोरी पो ! हाम्रो घर समाजमा यिनै सानासाना कुरामा नै छोराछोरीबीच भेदभाव गरिन्छ । हाम्रो यो पुरुषप्रधान समाजमा किन छोरा मान्छेले जे गरे पनि सही हुन्छ र छोरी मान्छेले गरेको हरेक कार्य गलत ठानिन्छ ? Share
खाना मीठाे नभएकाे बहानामा पनि कुटिन्छन् महिला परिवार सबै सँगै हुँदा त लकडाउन पनि चाडपर्वजस्तै लागेको होला कतिपयलाई, तर दुई छाक टार्नका लागि दैनिक रोजगारी गर्नेहरूका लागि भने यो विपद्‌ले धेरै समस्या निम्त्याएकाे छ । कति देखिने समस्या छन् भने कति नदेखिने Share
अनि म गलत मान्छेको शिकार हुनबाट बचेँ... हो, इन्टरनेटमा धेरै शिकारीहरू ढुकेर बसिरहेका हुन्छन् । धेरै खतरनाक मानिसहरू दाउ हेरेर बसिरहेका हुन्छन्, जसले सिधासादा मानिस भेट्नेबित्तिकै फसाइहाल्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा घृणा फैलाउन चाहन्छन् Share
सरकार ! भन्देऊ म कुन ठाउँमा सुरक्षित छु ? लकडाउनको समयमा ६ महिनाकी बालिका देखि ७० बर्षिया वृद्धासम्म घरका आफ्नैबाट बलात्कृत भएका घटना समाचारमा दिनहुँ पहिलो हेडलाइन बनिरहन्छन् । जन्म दिने आफ्नै बाबुबाट त कतिले आफैले नौ महिनासम्म गर्वमा राखेर हुकाएको छोरोबाट यस प्रकारका घटनाबाट प्रताडित बन्ने गरेका छन् Share
साइबर अपराध : बच्ने कसरी ? नेपालको साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनमा साइबर अपराधमा संलग्न जोकोहीले पनि ५ वर्ष जेलसजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ Share
विद्यार्थी हुनुहुन्छ ? यसरी चलाउनुस् सामाजिक सञ्जाल अहिले धेरै किशोरकिशोरीहरू प्रेम जनाउनकै लागि आफ्नो फेसबुकको पासर्वड प्रेमी या प्रेमिकालाई दिने गर्दछन् । तर उनीहरूबीच दरार पैदा हुनेबित्तिकै बदलाको भावना जागृत हुने हुँदा प्रेमी वा प्रेमिकाले तपाईंको फेसबुकको गलत प्रयोग गर्न सक्छन् Share
हिंसाको परिवर्तित रूप महिलाका समस्या सुन्ने प्रहरी प्रशासनदेखि अदालतसम्म महिलाकाे समस्या सुनिदिन महिला नै हुनुपर्छ । अनि मात्र पीडित महिलाले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना समस्याहरू खुलेर व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ Share
जुम्ली नियति : वर्षभरि काँधमा कुटो तर पेट सधैँ भोको अब तीनै तहका सरकारले संविधानतः उचित कार्यक्रम ल्याएर मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउनेतर्फ दृढ भएर लाग्नु जरुरी छ Share
हे भगवान् ! प्रिय साथी रेस्माको जस्तो कहालीलाग्दो मृत्यु कसैलाई नदेऊ अचेल त उनको नाममा हरेक दिन दियो बाल्दा भगवानसँग यही कामना गर्छु– बाबा र हजुरआमाको मृत्युभन्दा पनि प्रिय साथी रेस्माको जस्तो कहालीलाग्दो मृत्यु कसैलाई नदेऊ । अनि रेस्माजस्ता कलिला बालबालिकाहरूले प्रेमकाे नाममा जीवन आहूति दिन नपरोस् Share
स्वदेशी समाजमा विदेशी महामारी अन्त्यमा, विपदमा छौँ, र पनि हामी सिक्दै छौँ, हाम्रो समाज सिक्दै छ । हाम्रो देश सिक्दै छ तर मलाई विश्वास छ कि मेरो देशको स्वदेशी माटोमा यो विदेशी महामारीको अन्त्य हुनेछ । मेरो जस्तै सोचसँगै सोच बढाऔँ, सतर्कता बढाऔँ, संक्रमणलाई बढाएर हाेइन, लडेर जितौँ Share
लकडाउनले अभिनय सिकायाे अहिले यो फुर्सदिलो समयलाई भने मैले गजबले उपयोग गरेकी छु, कथाहरू लेखेर । बिर्सिनै लागेको आफ्नो प्रतिभालाई फेरि उजागर गर्न अहिले म हरेक दिन नयाँनयाँ कथा र कविताहरू कोर्ने गरिरहेकी छु Share
के हो क्वारेन्टाइन ? किन पालना गर्ने नियम ? Share
कोरोनाको कहरमा कतै तपाईंमाथि दुर्व्यवहार त भएको छैन ? सोच्नुस् है ! दिनहुँ आफ्नै परिवारका सदस्यबाट बलात्कार भएका समाचारहरू टेलिभिजन पत्रपत्रिकामा भेट्छौँ । त्यसैले लकडाउनको समस्याभन्दा दुर्वव्यवहारको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको छ Share